अख्तियारको ३४ स्टिङ अप्रेसनः धरान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित ४४ भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश १ ∕ अख्तियारको ३४ स्टिङ अप्रेसनः धरान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित ४४ भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ
अख्तियारको ३४ स्टिङ अप्रेसनः धरान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित ४४ भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ साउन १२ गते, १७:५९ मा प्रकाशित
विराटनगर—गत असार २७ गते धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपपि प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र उनका भतिजा डा. रामहरि रौनियारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित रंगेहात पक्राउ ग¥यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आएका एसपी हेम थापाको नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले उपकुलपति राजकुमार र भतिजा रामहरिलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुमाथि अख्तियारले विशेष अदालतबाट म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदारसँग ठेक्का लिए वापतको ८ लाख रुपैयाँ नगद घुससहित रौनियार प्रतिष्ठानस्थित निवासबाट रंगेहात पक्राउ परेका थिए । रौनियारलाई कार्यकक्षमा रकम लिएर निवासमा राख्न जाने बित्तिकै पक्राउ गरिएको थियो ।
अख्तियारले प्रदेशमा १ मा घुससहित पक्राउ गरेको उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक हो । अख्तियारले प्रदेश १ बाट घुस रकमसहित दुई वर्षमा डाक्टर र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्न ३४ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले प्रदेश १ बाट दुई वर्षमा घुसखोरीलाई पक्राउ गर्न ३४ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेर ४४ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
१४ जिल्ला प्रदेश १ को विभिन्न जिल्लाहरूबाट अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरेर घुसखोरी कर्मचारीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको आयोगको अभिलेखमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ गर्न अख्तियारले १८ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेमा २४ जना रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्ने सरकारी कर्मचारी र चिकित्सकहरू समेत छन् ।
अख्तियारको अभिलेखअनुसार घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ पर्नेको संख्यामा वृद्धि छ । आयोगअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १६ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेकोमा २० जनालाई घुस रकमसहित रंगेहात अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको अभिलेखमा देखिन्छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा ४ जना बढी घुससहित रंगेहात अख्तियारको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
इटहरीस्थित आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ८६ वटा प्राप्त कुल उजुरीहरूमध्ये प्रारम्भिक छानविनबाट ९ सय २१ वटा फछ्र्यौट भएको छ । जसमा ८ सय ६५ वटा जिम्मेवारी सरेर चालु आर्थिक वर्षमा आएको आयोगले जनाएको छ । प्रराम्भिक उजुरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ५ सय ६० वटा जिम्मेवारी सरेर र आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय २६ वटा उजुरी आयोगमा आएको थियो ।
आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा ९ मुद्दा दायर
विस्तृततर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ६३ र आर्थिक वर्षमा ४७ वटा नयाँ गरि ०७५/०७६ मा १ सय १० वटा उजुरी इटहरिस्थित आयोगको कार्यालयमा दर्ता भएको अभिलेखमा देखिन्छ । जसमध्ये ३९ वटा अनुसन्धान पूरा गरी अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडाैं पठाएकोमा आर्थिक वर्षमा ९ वटा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्यितारको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
इटहरीस्थित आयोगले घुससहित पक्राउ गरेको र उजुरी परेकोमा माथि अनुसन्धान पुरा गरि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गरेको छ । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले विशेष आदलतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । अख्तियारले घुसखोरीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न सेवाग्राहीको भेषमा स्टिम अप्रेसन गर्दै आएको छ ।